« Efa nahazo fanazarana ara-batana fenofeno ireto mpilalao tantanako ireto, hoy i Rôrô Rakotondrabe mpanazatra raha tafaresaka tamin’ny Tia Tanindrazana tamin’io omaly io, ka ny resaka “Tactique” sisa no hamafisina amin’izao herinandro faramparany hanaovana fanazarana izao. Tsy dia manana “ Star ” izahay ao anatin’ireto mpilalao ireto fa ny lalao iombonana na “ jeux collectif ” no hianteherana. Salama tsara avokoa ireo mpilalao rehetra afa-tsy i Feldam (Jet Mada) izay naratra tamin’ny sabotsy teo teny Carion. Mbola handrasana koa ny fahatongavan’i Rinho Michel avy any Seychelles sy Simouri Olivier avy any La Réunion hanatevin-daharana ny ekipa. Vonona tanteraka izahay hiatrika ny Barea Chan etsy Mahamasina amin’ny alahady ho avy izao», hoy izy,